Soomaaliya, 05 January 2020
Dowladda Soomaaliya oo Gargaar Gaarsiisay Afgooye
Maxkamadda Boosaaso oo Xukunno Ridday
Al-Shabaab oo weerartay saldhig ku yaal Lamu
Dagaal ayaa laga soo sheegayaa Kenya oo ka dhacay gobolka xeebta ee Lamu kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar saldhig ciidan. Khasaaraha Ilaa hadda lama iga Hase yeeshee waxa la maqlay rasaas iyo qarax.
Xaaf oo Magacaabay Guddi Doorasho
Talaabdan ayaa ka hor-imanaysa qorshaha maamul u sameyta ee ay horkacayso wasaradda arrimaha gudaha ee dowladda Somalia
Dhageyso Barnaamijka Dhacdooyinka ee tooddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qoddobo kala duwan oo ku saabsan Somalia, waxaana barnaamijka soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay xaaladda amniga magaalada Muqdisho, iyo sababta loogu guuleysan la’yahay in laga hortago weerarada argagixiso ee kooxda Al-Shabaab ay ka fuliso magaalada.
Safiirka Turkiga ee Somalia oo ka hadlay qaraxii Ex-Control
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaaz ayaa sheegay in ka sokow weerarkii maalintii Sabtidii ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen laba muwaadin oo u dhashay Turkiga ay dawladdiisu sii wadi doonto taageerada ay siiso Soomaaliya.
Banaanbax ka dhan ah qaraxii Ex-Control oo Muqdisho ka dhacay
Banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo qaraxii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay isgoyska Ex-Control Afgooye ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Bandhigga VOA: Doorka dhallinyarada ee samafalka